२० श्रावण २०७८, बुधबार १६:५१ PM
४ मंसिर २०७७, बिहीबार १६:०३ मा प्रकाशित
२०७७ मङ्सिर ४ बिहीबार, काठमाडौं । बिहीवार शेयर कारोबार रकमले ऐतिहासिक उचाई कायम गरेको छ । यस दिन हालसम्मकै रू. ६ अर्ब ११ करोड ४२ लाख ७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यो रकम हालसम्मकै उच्च रहेको हो । यस अघि विसं २०७६ साल फागुन १८ गते रू. ४ अर्ब ८४ करोड ७४ लाख ३७ हजारको शेयर कारोबार भएको थियो ।
बिहीवार कारोबार रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्दा नेप्से परिसूचक पनि ३६ दशमलव ३२ अंकले बढेर १ हजार ७७८ दशमलव १२ विन्दुमा पुगेको छ । यो दिन ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ४ दशमलव ९८ अंक बढेर ३४३ दशमलव शून्य ७ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको दिन कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ओगटेको छ । यस दिन उक्त कम्पनीको रू. ४१ करोड ८ लाख ४५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
उच्च अंकले बढेको बिहीवारको बजारमा ३२ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यो दिन मेगा बैंकको संस्थापक शेयरको मूल्य सबैभन्दा बढी ३ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ । यो दिन तारागाउँ रिजेन्सी होटल र युनिलिभरको शेयरमूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ भने १३ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वद्धि भएको छ ।
यस दिन ९ प्रतिशतभन्दा बढीले शेयरमूल्य बढ्ने कम्पनीहरुमा बोटलर्स नेपाल तराई , हिमालयन डिष्टिलरी, विशाल बजार कम्पनी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, सोल्टी होटल , एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेण्ट, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स , हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, ओरियण्टल होटल, गोर्खाज फाइनान्स र गुडवील फाइनान्स रहेका छन् ।
बिहीवार कारोबारमा आएका १२ ओटै समुहको परिसूचक बढेको छ । यस दिन व्यापारिक समुहको परिसूचक सर्वाधिक ९ दशमलव ९४ प्रतिशत बढेको हो ।
त्यस्तै होटल समुहको ९ दशमलव ३८ प्रतिशत, बैंकिङ्कको शून्य दशमलव २१ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव ४ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ५२ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव ५७ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ४ दशमलव ३३ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको ५ दशमलव ६४ प्रतिशत, अन्यको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत, लघुवित्तको १ दशमलव ७ प्रतिशत, जीवन बीमाको ३ दशमलव ५ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।